China malefaka PVC Cable Winders orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Ny Winders malefaka PVC Cable Winders dia manampy rehefa mameno finday na manadio ny tranonao ianao. Ny mpihazona PVC malefaka foana no manao azy ireo miaraka amina tariby vy hametahana ireo tariby. Manana bobongolo efa misy be dia be izahay miaraka amina endrika sy loko mahafatifaty amin'ny 2D na 3D, izay azo atao pirinty na voasokitra amin'ny ...
Ny Winders malefaka PVC Cable Winders dia manampy rehefa mameno finday na manadio ny tranonao ianao. Ny mpihazona PVC malefaka foana no manao azy ireo miaraka amina tariby vy hametahana ireo tariby. Manana bobongolo efa misy be dia be izahay miaraka amina endrika sy loko mahafatifaty amin'ny 2D na 3D, izay azo atao pirinty na voasokitra eo amin'ny lafiny anoloana na any ambadiky ny tadin'ny rivotra. Ny mpamorona dia manao ny Winders Cable PVC Winders tsy mora sy tsotra fotsiny, fa manome ireo singa ho an'ny singa maro hafa ary mahatonga ny Soft PVC Cable Winders Winders ho mahafinaritra sy manintona.
Ny Winders PVC Cable Winders dia tsy fitaovana fanadiovana ny efitranonao fotsiny fa koa haingon-trano hitafy ny tontolonao. Raisina an-tanana ireo mari-pamantaranao ho an'ny tarehin-tsoratra vaovao hamaritana ny hevitrao sy ny hevitrao. Rehefa mivoaka ianao dia mora entina ny Winders Cable PVC Winders ho ampiasaina any ivelany. Ny santionany dia ho vonona ao anatin'ny 7 andro sy ny famokarana tokony ho 15 ~ 20 andro. Maimaimpoana ny sarany bobongolo amin'ny entana efa misy, ary ny sarany bobongolo kely amin'ny endriny vaovao. Hevitra tsara hampiasaina ny Soft PVC Cable Winders and Holders rehefa manadio ny efitranonao ianao, na manadio ny kitaponao mba hisorohana ny fikorontanana.
Famaranana: Ny karazan-endriny rehetra, ny logo dia azo atao pirinty, anaovana embossed, Laser voasokitra ary tsia
Safidy fampiraisana mahazatra: vy mifatotra takelaka sy ny hafa
Teo aloha: Kavina vita amin'ny tànana sy fehin-tànana PVC malefaka
Manaraka: Soft Coasters PVC